आइतबार १०, असोज २०७८ १५:०६
बैधनाथ वेद विद्या आश्रममा स्वास्थ्य सामाग्री सहयोग
वेद विघ्या आश्रममा स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेको छ ।
स्थानीय तहको बजेट : कतै घरेलु रक्सीलाई अनुमति, कतै श्रीमानलाई प्रमुख अतिथि बनाउँदा कुटाकुट र मेयरको पदै चट्
बयालपाटा अस्पताललाई अन्तराष्ट्रिय सिद्देश्वर सेवा समाजद्धारा स्वास्थ्य सामाग्री तथा नगद सहयोग
बयालपाटा अस्पताललाई अन्तराष्ट्रिय सिद्देश्वर सेवा समाज पुना भारतले आर्थिक र स्वास्थ्य सामाग्री सहयोग गरेको छ । समाजले अस्पताललाई नगद रु १ लाख १ हजार र अन्य स्वास्थ्य सुरक्षाका सामाग्री सहयोग गरेको छ ।
जिल्ला अस्पताल र बयालपाटा अस्पताललाई नेपाल मानव धर्म सेवा समितिद्वारा सुरक्षाका सामाग्री, औषधी अक्सीजन सिलिन्डर सहयोग
नेपाल मानव धर्म सेवा समितिले बयालपाटा अस्पताल र जिल्ला अस्पताल अछामलाई स्वास्थ्य सुरक्षाका सामाग्री, औषधी अक्सीजन सिलिन्डर सहयोग गरेको हो । दुबै अस्पताललाई आवश्यक पर्ने ३ लाख बढीको स्वास्थ्य सामाग्री, औषधी र अक्सीजन सिलिण्डर सहयोग गरेको समितिले जनाएको छ ।
राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्षसहित २५ जनाविरुद्ध ५ करोड हिनामिना गरेको आरोपमा मुद्दा दायर
सहकारी संस्थाको ५ करोडभन्दा बढी रकम हिनामिना गरेको आरोपमा दाङको राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीसहित २५ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ ।
ढकारी गाउँपालिकामा बजेट प्रस्तुत : कृषकलाई मासिक भत्ता
अछामका स्थानीय तहले बिहिबार आगामि आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । स्थानीय तहले नयाँ नयाँ कार्यक्रम ल्याउने क्रम जनप्रतिनिधिको अन्तिम वर्षमा आइपुग्दा पनि जारी नै छ । त्यहि अनुरुप अन्य स्थानीय तहभन्दा ढकारी गाउँपालिकाले कृषकलाई राहत पुग्ने पुग्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ ।
पोर्चुगलका फुटबल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डोमाथि कोकको बोतल प्रहार भएको छ । उनलाई फ्रान्सका समर्थकले कोकको बोतल प्रहार गरेका हुन् ।
नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका कार्यकर्ताद्वारा निर्वाचन आयोगमा कलम चिन्हसहित नयाँ दल दर्ता गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनपछि गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई बदर गरिदिएको छ।
खुसी छैनन् नपढेरै पास भएका विद्यार्थी
कोरोना भाइरसको संक्रमण समुदायसम्म फैलिएपछि यसको मारमा विद्यार्थी परेका छन् । शैक्षिकसत्रका दुइ वर्ष सकिए । विद्यालयमा भर्ना भएका विद्यार्थी नपढेरै माथिल्लो कक्षामा गए । तर यसरी विद्यालयले अन्तिरिक मुल्यांकन भन्दै निकालेको नतिजामा न त अभिभावक सन्तुष्ट छन् न त विद्यार्थी ।
छाेराकाे स्मृति दिवसकाे अवसरमा कुवँर दम्पतिद्वारा अस्पतालाई आर्थिक सहयाेग
साँफेबगर नगरपालिका वडा नं ४ मष्टामाण्डाैका एक दम्पतिले छाेराकाे स्मृति दिवसकाे अवसरमा वयालपाटा अस्पतालाई आर्थिक सहयाेग गर्नु भएकाे छ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले जिल्ला अस्पताल अछाम र कमलबजार नगरपालिका वडा नम्बर ६ मा रहेको विरपथ स्वास्थ्य चौकीलाई एन ९५ मास्क हस्तान्तरण गरेको छ । पार्टिलाई चिनिया कम्युनिष्ट पार्टिले दिएको मास्क तथा हाईड्रोजन अक्सिजन मेसिन मध्ये अछाम जिल्लामा मास्क हस्तान्तरण गरिएको हो । पार्टीका केन्द्रिय सचिव तथा पुर्व सासंद प्रेम सुवाल अछाम जिल्लामै पुगेर मास्क हस्तान्तरण गर्नु भएको थियो । जिल्ला अस्पताल अछामलाई १ हजार ५ सय २० तथा विरपथ स्वास्थ्य चौकीलाई ३ सय २० थान एन ९५ मास्क उहाँले हस्तान्तरण गर्नु भएको थियो । मित्र देशको पार्टीले दिएको स्वास्थ्य सामाग्री कोरोनाको बेला अग्रमोर्चामा खटिनेलाई आवश्यकता पर्ने भएकाले पार्टिको केन्द्रिय कमिटीको निर्णय अनुसार वितरण गरिएको सचिव सुवालले बताउनु भयो ।
‘हामी कुन पार्टीमा छौं ? निर्वाचन आयोगमा टोपबहादुर र प्रभु : न एमाले, न माओवादी !
माओवादी छाडेर एमालेमा प्रवेश गरेपछि सांसद पद गुमाएका टोपबहादुर रायमाझी र प्रभु शाह शुक्रबार दिउँसो अकस्मात् निर्वाचन आयोगमा पुगे । आयोगले आफूलाई माओवादीकै रुपमा चिन्छ कि एमालेका रुपमा चिन्छ भनेर बुझ्न उनीहरु त्यहाँ पुगेका हुन् ।
दातृ निकायले दिएको स्वास्थ्य सामाग्री खोइ ? सरकार भन्‍छ- अस्‍पताललाई पठायौँ, अस्‍पताल भन्‍छ- पाएनौं
नेपालमा कोभिडको दोस्रो लहर फैलिएसँगै स्वास्थ्य सामाग्रीको अभाव भयो । अस्पतालमा बेड र स्वास्थ्य सामनग्रीको अभाव भएपछि विभिन्‍न राष्ट्रले स्वास्थ्य सामाग्री दिने घोषणा गरे । घोषणा गरे अनुरुप स्वास्थ्य सामाग्री आइरहेकै छ ।
नगरले वडालाई छुट्याउने बजेटमा नेपाली कांग्रेसले जितेका वडालाई विभेद गरेको भन्दै कार्यापालिकाको बैठक बहिष्कार गरेका साँफेबगर नगरपालिकाका ६ जना वडाअध्यक्षले शुक्रबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति निकालेका छन् ।
६ फेब्रुअरी २०२० मा एचबीएम नेपाल नामक युट्युब च्यानलमा एउटा भिडियो अपलोड भयो, जहाँ आफूलाई सामाजिक अभियन्ता दाबी गर्नेहरूबीच कुटाकुट परेको देखिन्छ । यो भिडियो एकताका युट्युब ट्रेण्डिङमै परेको थियो । दाताले पीडितका लागि पठाएको केही हजार रुपैयाँ पुण्य गौतमले हिनामिना गरेको आरोप युट्युबरले लगाउँछन् । भनाभन बढ्दै जान्छ । बीचमा आइपुग्छन्, अर्का कथित् सामाजिक अभियन्ता विनयजंग बस्नेत । ‘१५ हजारमा पीडितलाई जम्मा २ हजार मात्र दिएर १३ हजार कहाँ लैजानुभयो ?’, विनयजंगले पुण्यलाई प्रश्न गर्छन् । प्रतिवादका क्रममा पुण्य भन्छन्, ‘हावा कुरा सुनेर भएन नि, तपाईंले लाखौँलाख खानुभयो रे !’ अनि विनयजंगको पारो तात्छ । ‘बोल्न आउँछ भन्दैमा जे पायो तै बोल्ने ?’ भन्दै उनले पुण्यलाई झापु लगाउँछन् ।
सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले ७५ करोड बराबरको ऋणपत्र निष्काशन गर्ने, ब्याजदर कति ?
सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले आइतबारदेखि १० बर्षे अवधिका लागि ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र निष्काशन गर्ने भएको छ । बैंकले प्रति ऋणपत्र एक हजार रुपैयाँ अंकित मूल्यका ७ लाख ५० हजार कित्ता ऋणपत्र निष्काशन गर्न लागेको हो । उक्त ऋणपत्रको बार्षिक ब्याजदर ९ प्रतिशत रहेको छ ।
अछामका विभिन्न पालिका स्वास्थ्य चौकीमा युवा सुचना मञ्च बाँके द्वारा स्वास्थ्य सामाग्री वितरण
युवा सुचना मञ्च बाँकेले अछाम जिल्लाका विभिन्न पालिका तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा स्वास्थ्य सुरक्षाका सामाग्री वितरण गर्न थालेको छ । मञ्चको पहलमा अछामका विभिन्न ठाँउमा कोभिड १९ को प्रतिकार्यका लागि स्वास्थ्य समाग्री प्रदान गर्ने अभियान सुरु भएको हो । अभियान अन्र्तगत जिल्लाको पञ्चदेवल बिनायक नगरपालिकामा स्वास्थ्य सुरक्षाका सामाग्री हस्तान्त्ररण गरिएको छ ।
साँच्चै मान्छे कसरी मर्छ ? घोप्टो पर्न नसकेर, एउटै समयमा दुईजना सिकिस्त भएर, नर्सको नजर नपरेर, हुँदाहुँदैको अक्सिजन नपाएर, पाएको अक्सिजन थेग्न नसकेर, बाँच्ने मन हुँदाहुँदै खोइ कसरी मर्छ मान्छे ? यी कुनै पनि कारण मृत्युको कारण बन्नलायकका कारण होइनन् । तर, कोभिड १९ को संक्रमणले मृत्युका अकारणहरू कारण भइदिए । मृत्युदेखि कहिल्यै नडराएका राजु बस्नेतको आँखामा मृत्यु भयानक बनेर उभिएको थियो आइसीयूमा । भेन्टिलेटरमा । मृत्युकै काखमा भएको मानिस कसरी निदाउन सक्नू ?
एक जनाको शव भेटियो, विस्थापितहरुले सामुदायिक भवन र विद्यालयमा रात बिताए
सिन्धुपाल्चोकमा बाढीमा हराइरहेका २० जनामध्ये एक जनाको शव भेटिएको छ । सम्पर्कविहीन भएका एक जना चिनियाँ नागरिकको शव भेटिएको सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अरुण पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । यस्तै चार जना धुलिखेलबाट सम्पर्कमा आएकाले उनीहरु बाढीमा परेर हराएका हुन् या होइनन् भनेर सोधपुछ भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।